मानिसहरु किन दिन्छन् धोका ? « SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
पत्रत्रिका प्रवास दुर्घटना कृषी अभिमत भान्सा परिकार मौसम कला/साहित्य भिडियो फिचर टिप्स बिचित्र
लेक लागेर एक पर्यटकको मृत्यु
राप्ती नदिमा डुबेर एक युवक बेपत्ता
सेयर बजारमा लगानी बढाउन वित्तिय संस्थाहरुलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आह्वान
Why Absolutely Everybody Is Talking About Top Quality Essay
सांसदहरु भन्छन् : लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने ज्ञानेन्द्रलाई कार्वाही हुनुपर्छ
उत्थानशील समुदाय विषयमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
“हिन्दु” धर्मको अन्त्य नभई छुवाछुत हट्दैन
ख्रिष्टियन महासंघको प्रदेश भेला सम्पन्न
नर्स बन्ने सपना साँचेकी अप्सरा नेपाली जिवनको दुहाई माग्दै
दुईलाख नहुदा हस्पिटलमा अलपत्र कुमारी परियार
सैघालीका संयोजक ‘सरु सुनार’ सम्मानित
सहवास पछि दलित महिलाको ज्यान जाँदा पनि पुरुषको बचाउ गरियो
मानिसहरु किन दिन्छन् धोका ?
सैघाली खबर २०७५ मंसिर ५, बुधबार मा प्रकाशित
अमेरिकाका उप–राष्ट्रपति माइक पेन्स कुनै अन्य महिलासँग एक्लै डिनर वा लञ्चका लागि जाँदैनन् ।
यस्तो नियम उनले आफ्नी श्रीमती क्यारेनप्रति इमान्दारिता स्थापित गर्नका लागि बनाएको बताउँछन् । उनले आफ्नो धार्मिक आस्थामार्फत् श्रीमतीमाथि बफादार रहने प्रेरणा पाउने बताएका छन् ।
हुन त माइक पेन्सको निर्णय कुनै नौलो होइन । एक सर्वेक्षणका अनुसार ५।८ प्रतिशत मानिसहरु सम्बन्धमा हुँदा कुने अन्य महिला वा पुरुषसँग डिनर वा लञ्चमा जानु धोका दिनु हो भन्ने मान्यता राख्छन् ।
तपाईंले माइक पेन्स र केरनबारे जे सुकै सोच्नुहोस् तर उनले कम्तिमा आफ्नो सम्बन्धमा मर्यादाको एउटा सीमारेखा त निश्चित गरेका छन् ।
हुन त धेरैजसो मानिसहरुले आफ्नो सम्बन्धमा धोका के हो, यसको कुनै सीमा वा परिभाषा तय गरेका हुँदैनन् । उनलाई विश्वास र विश्वासघातबीचको फरक नै थाहा हुँदैन ।
हाम्रो समाजमा सम्बन्धमा धोकाको घटना निकै सामान्य भइसकेको छ । तर तर हरेक जोडीले आफ्नो पार्टनर आफूप्रति इमान्दार होस् भन्ने चाहना राख्छन् ।
कतिले विश्वासघात गर्छन् यसको कुनै सही आँकडा जुटाउन निकै मुश्किल छ । यसको ठूलो कारण यो हो कि सम्बन्धमा विश्वासघातको विषयमा मानिसहरु सायदै सही कुरा गर्छन् ।
पहिले ७५ प्रतिशत पुरुष र ६९ प्रतिशत महिला विश्वासघात गर्ने बताइन्थ्यो तर हालैको अनुसन्धानले यो बताउँछ कि विश्वासघातको मोर्चामा महिला पुरुषभन्दा अलिकति पनि कम छैनन् ।
तर रोचक कुरा के छ भने केवल पाँच प्रतिशत मानिसहरु उनका साथी उनीसँग छल गर्नेछन् वा गरिरहेका छन् । धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो साथीमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन् ।
विश्वासघातको अर्थ के ?
कालगरी युनिभर्सिटीकी सुसन बून भन्छिन्, ‘जो मानिस डिप्रेशनको शिकार हुँदैनन्, उनीहरु साधारणताय आफ्नो साथीमाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्छन् । उनीहरु कहिले पनि आफ्नो पार्टनरले धोका दिनसक्छन् वा दिइरहेका छन् भनेर सोच्दैनन् ।’
हुन त यसको सबैभन्दा ठूलो कारण यो पनि हो कि विश्वासघातको परिभाषा विभिन्न मानिसहरुका लागि भिन्न हुन्छ । सुसन बून भन्छिन्, ‘कुनै पनि सम्बन्धमा विश्वासघातको अर्थ के हो त्यसको गलत अनुमान लगाइन्छ । यो ठूलो कारण यो हो कि मानिसहरु यसबारे कुरा गरेर कुनै मर्यादा निश्चित गर्दैनन् । हरेक व्यक्तिका लागि धोकाको भिन्न अर्थ हुन्छ ।’
करिब ७० प्रतिशत मानिसले आफ्नो पार्टनरसँग कहिले पनि विश्वासघातको विषयमा कुनै चर्चा नगरेको स्विकारेका छन् । के कुनै
सम्बन्धमा रहँदा डेटिङ एप डाउनलोड गर्नु धोका हो र?
डेटिङ एप टिन्डरका १८ देखि २५ प्रतिशत ग्राहक पहिले नै कुनै न कुनै सम्बन्धमा बाँधिएका हुन्छ । यसको अर्थ यो कि उनीहरु सम्बन्धमा रहँदा पनि दोस्रो साथीको खोजी गरिरहेका छन् । यीमध्ये धेरै क्याजुअल सेक्सकमो खोजीमा यस्तो गर्छन् ।
कसैका लागि दोस्रो व्यक्तिसँग सेक्स गर्नु धोका हो । कतिले भने मेसेजमा कुरा गर्नु पनि धोका नै हो भन्छन् । भावनात्मक विश्वासघातको परिभाषा तय गर्नु अझ मुश्किल छ । अफिसमा मानिसहरु आफ्ना कुनै साथीसँग नजिक भएका महसुस गर्न थाल्छन् । उनीहरुको प्रतिक्षा गर्छन् । आगमनले निकै खुसी हुन्छन् । अब यसलाई कुनै सम्बन्धमा बाँधिएका व्यक्तिको विश्वासघात मान्ने कि नमान्ने रु
धेरैजसो मानिसहरु यो मान्छन् कि यदि कुनै सम्बन्धको मर्यादा पहिले नै तय गरे विश्वासघातलाई बुझ्न दुबैका लागि निकै सजिलो हुन्छ । कुनै पनि सम्बन्धको विकासका लागि यो आवश्यक पनि छ ।
धेरैकुरा तपाईंको साथीहरुमा पनि निर्भर हुन्छ । यदि तपाईंका धेरैजसो साथीले पार्टनरलाई धोका दिइरहेका छन् भने तपाईंले पनि धोका दिनु निश्चित छ । धेरैजसो हामी आफ्नो व्यवहारसँग मेल खाने व्यक्तिको नजिक हुन्छौं ।
विश्वासघात गर्नुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ ?
कुनै सम्बन्धमा बाँधिएका मानिसहरु धोकालाई अनैतिक मान्छन् । यस्तोमा यदि कसैले विश्वासघात गरेको छ भने उनलाई के गर्ने रु के उनीहरुले आफ्नो गल्ती मान्नुपर्छ ?
धेरैजसो मानिसहरु यसको जवाफ ‘हो’ भनेर दिन्छन् किनभने ९० प्रतिशत मानिसहरुले यदि उनका साथीहरुले धोका दिएका छन् भने उनीहरु यसको कारण थाहा पाउन चाहेको बताउँछन् ।
विभिन्न अनुसन्धानले यो इशारा गर्छ कि कुनै पनि सम्बन्धमा इमान्दारितालाई निकै महत्व दिइन्छ । उनीहरुलाई लाग्छ कि धोका दिँदा उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा क्षती हुन्छ । यसैकारण धोकाकै कारण अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै सम्बन्धविच्छेद हुन्छ ।
यदि तपाईंले सम्बन्धमा धोका दिनुभएको छ भने तपाईंको यस्तो व्यवहारले तपाईंको साथीलाई समस्यामा पार्छ ।
हुन त जो व्यक्ति आत्ममुग्ध हुन्छन् उनीहरुलाई यस्तो स्विकारोक्तिले धेरै पीडा दिन्छ । कति त डिप्रेशनमा पनि जान्छन् । यस्तै, केही आफ्नो साथीको धोकापछि निकै आक्रामक हुन्छन् ।
यदि कसैले एकपटक धोको दिएको छ भने साधारणतया उनका साथीले उनलाई माफी दिन्छन् । कतिपटक यसैकारण सम्बन्ध टुट्छ । धेरै मानिसहरु यस्ता धोका हुँदा पनि आफ्नो सम्बन्ध बचाउने कोसिस गर्छन् । यदि धोका दिनु बानी नै भएको छ भने कुनै विकल्प छैन, उक्त सम्बन्धबाट बाहिरिनुबाहेक ।
निद्रा नलागेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुस् यो उपाय
बसमा यात्रा गर्दा वान्ता हुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता टेक्निक
उसिनेको अण्डाका अदभुत फाइदा
ध्यान दिनुस्, यसरी बस्दा हुन्छ स्वास्थ्यलाई हानि
सात दिनमै स्लिम शरीर बनाउन मन छ,यी ५ उपाय अपाउनुहोस्
स्मरणशक्ति नगुमाउनका लागि दिनको नौ हजार पाइला हिँड्नुस् !
© 2019 Saighali Media Group. All rights reserved.